WARARKA MAANTA::: OCT 27, 2004
Gacan ku dhiiglihii dilay Agaasimihii Bangiga Barakaat oo lagu toogtey meel fagaare ah….
Dalladda Culummada Soomaaliyeed oo diidey dalka la keeno ciidamo shisheeye…
GOLAHA GUURTIDA HAWIYE OO SOO DHAWEEYAY DAMBIGII LAGU WAAYAY SHIRKADDII AL-BARKAAT
Milled Zanawi "Haddii golaha amaanka iyo nabadgelyada afrika naga codsaadaan waan u direynaa soomaaliya…."
Golaha baarlamaanka oo shalay ka gaabsaday mooshinkii ahaa in Raiisul wasaaraha uu noqdo …..
Hay’adda nabadda iyo xuquuqda Aadanaha ee Elman oo ka codsatey beesha caalamka in la taageero dawlada..
Maxkamadda Islaamiga ah ee Warshadda Caanaha ayaa waxay shalay xukun qisaas ah ku xukuntay gacan ku dhiiglihii dilay Agaasimihii Bankiga Barakaas Cabbaas Cabdi Cali.
Gacan ku dhiiglahan oo lagu magacaabo Maxamed Abshir Shuuke ayaa maxkamadda Horteeda waxa uu ka qirtay inuu dilay Marxuum Cabbaas Cabdi Cali, waxayna ehelladii uu ka dhashay Marxuumka ay ka dalbadeen Midowga Maxkama-daha Islaamiga ah in loo qisaaso, waxaan markiiba la geeyay meel fagaare oo ku dhow qabuuraha Barakaat, halkii ayaana lagu toogtay, hase ahaateen intii aan la toogan ayaa Maxamed Abshir Shuuke waxa uu dalbaday inuu iska bixiyo salaadda Casir, waxaana markiiba laga ogolaaday inuu iska bixiyo waajibkaas.
Markii uu salaadda soo dhameystay ayaa la geeyay goobtii lagu toogan lahaa, waxaana loo soo xulay dilkii 27-nin oo ka tirsan Maxaakimta Islaamiga ah ciidankeeda, waxaana lagu furay rasaas illaa uu ka geeriyooday.
Marxuumka ayaa markiiba lagu tukatay Salaadda Janaasada, waxaana xukunkaas soo dhaweeyya dadweynaha ku nool gobolka Banaadir, waxayna sheegeen in dad badan ay ku cibro qaadan doonaan
Warqad qoraal ah oo ay soo saareen culummada Soomaaliyeed oo ay kaga hadlayaan keenista Ciidanka Shisheeyaha ah ayaa waxay u qornayd sidatan:
Dallada Culummada Soomaaliyeed iyadoo ka tarju-maya shareecada Islaamka, tixgelinayna danta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed xiganayana bayaankii ay dal-ladda culummada Soomaaliyeed horay u soo saartay waxay u soo jeedinayaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka.
Marka hore dalladu waxay taageersan tahay in dalka Soomaaliya uu yeesho dowlad soo celisa qarannnimadii iyo wadajirkii ummadda Soomaali-yeed dhowrtana diinta iyo maslaxadda guud kana shaqeysa dib u heshiisiinta dalka iyo dibadda.
Dalladda culummad Soomaaliyeed waxay u arkaan in wax maslaxad ah aysan ugu jirin, waana ka soo horjeedaan in dalka la keeno ciidan shisheeye oo hub ka dhigis sameeya, waayo waxaa ka dhalan kara dhibaatooyin fara badan oo taabanaya arrimaha diinta, dil naf aan waxba galabsan, dhaqanka suubban, caafimaadka, dhaqaalaha iyo iyadoo sharaftii iyo madax bannaanidii waddanka ay halis gasho, waxaan soo jeedinaynaa in dib u habeyn lagu sameeyo ciidankii qaranka Soomaaliyeed loona dhameystiro wixii ay ku howlgeli lahaayeen sida dhaqaalaha iyo qalabkaba.
Waaa inay dowladdu kaashataa kalsoonida dadkeeda si looga helo qaybaha kala duwan ee bulshada wada shaqeyn iyo kala dambeyn.
Ugu dambeyntii waxaan ummadda Soomaaliyeed u soo jeedinaynaa inay ka faa’iidaystana fadliga bisha barakaysan ee Ramadaan inay ALLE u wada towbad keenaan, is cafiyaan qabsadanna Kitaabka EBBE, waxaana qoraalkaan ku saxiixnaa G/K/Xigeenka dalladda Culummada Soomaaliyeed Sheekh Axmed Maxamed Suleymaan.
Warqad qoraal ah oo ay na soo gaarsiiyeen golaha guurtida oo ka kooban 114-xubnood ayaa soo dhaweeyey dambigii lagu waayay shirkaddii Barakaat, kaddib markii dowladda Mareykanka ku eedaysay inay shirkaddaasi la shaqeyso waxa loogu yeeray argagaxisada caalamiga ah.
"Waxaan ku faraxsannahay in wax dambi ah lagu waayo shirkaddaasi waayo waaa dad Islaami ah bay yiraahdeen haddana Soomaali ah oo xaqdarro lagu haystay, ILAAHAYNA uu hadda u iftiimiyay xaqoodii" ayay yiraahdeen golaha guurtida.
Golaha guurtida Hawiye waxay ka codsanayaan dowladda Mareykanka in shirkaddaasi loo fasaxo howlaheedii shaqo oo ay ka haysay daafaha adduunka, loona celiyo lacagihii laga xannibay iyo kuwii ka lumay muddadii ay xirnayd shirkaddaasi.
Golaha guurtida waxa kale oo uu ka codsanayaa madaxweynaha dowladda federalka Soomaaliyeed iyo baarlamaankaba inay warqad qoraal ah u diraan dowladda Mareykanka si loo fududeeyo shirkadda Barakaat howlaheedii iyo hantidii ka maqnayd.
Waxaana qoraalkaan na soo gaarsiiyay afhayeenka afhayeenka golaha guurtida Hawiye C/llaahi C/lle Weheliye.
Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Milled Zanawi oo shir jaraa’id ku qabtay Addis Ababa mar uu kulan la lahaa madaweyanaha Dowladda Federalka Soomaaliya C/llaahi Yuusuf ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay qaabkii ay u dhacday doora-shadii xubnaha baarlamaanka ee dowladda lagu doortay dalka Kenya.
Zanawi wuxuu sheegay in doorashadaasi ay u dhacday si dimuqraadiyad ah oo aan horay uga dhicin dalalka Afrika, waana midda I rajo gelisay inaan arko Soomaaliya oo mar kale cagaheeda isku taagta.
Mar wax laga weydiiya in dowladda Itoobiya ay qayb ka noqon doonto ciidammo shisheeye oo la geeyo Soomaaliya ayaa yiri: "Waxay ku xiran tahay arrintaani golaha ammaanka iyo nabadgalyada qaaaradda Afirka hadii ay naga dalbadaanna waan u diraynaa ciidankaasi Soomaaliya".
Milled Zanawi wuxuu u soo jeediyay shacabka Soomaaliyeed inay ka faa’iidaystaan fursaddaan, caalamkana waxaan ugu baaqayaa inaysan lumin fursad-daas u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed.
Wararka naga soo garaya Nairobi waxay sheegayaan in kal fadhiga baarlamaanka ee la doonayo in looga doodo in ra’iisul wasaaraha la magacaa-bayo laga dhex doorto golaha baarlamaanka uu baaqday, kaddib markii qodobkaa lagu tilmaamay mid aan waqtigan aan loo baahnayn, waxaana goluhu uu shalay gudo galay xeer hoosaadka golaha baar-lamaanka, waxaana la sheegay in si aad ah looga dooday xeer hoosaadkaasi.
Xidhibaannadii watay mooshinka ah in ra’iisul wasaaraha laga dhex doorto golaah baarlamaanka waxay sheegeen in mooshinkooda aysan marnaba ka hari doonin oo ay wadi doonaan illaa baarlamaanku uu ka gudo galo, waxayna si aad ah uga xumaadeen in baarlamaanku uu arritaani fududeysto..
Hay’adda nabadda iyo xuquuqda Aadanaha ee Elman oo ka codsatey beesha caalamka..
Hay’adda nabadda iyo xuquuqda aadanaha ee Elman ayaa ugu baaqaysa beesha caalamka inay taageero dhaqaale iyo mid ciidanba la garab istaagaan dowladda Cusub ee uu madaxda ka yahay Col. C/llaahi Yuusuf Axmed, iyadoo la eegayo dhibaatooyinkii laga dhaxlay muddadii 14-ka sano ahayd.
Waxay hay’addu ugu baaqaysaan hoggaamiyeyaasha hubeysan inay hubkooda ku wareejiyaan dowladda cusub si looga gudbo marxaladaha adag, waxay kaloo hay’addu ugu baaqaysaa madaxweynaha dowladda Federalka ah ee ku mel gaarka inay wada xaajood la furto cid kasta oo ka hor timaadda dowladda si loo gaaro horumar la taagan karo, iyadoo la eegayo maamulladii la dhisay 14-kii sano sida dowladdii Cali Mahdi Maxamed ee 1991-kii oo dhammaantood la kulmay caqabo xoog badan.
Waxay kaloo hay’addu soo dhaweysay dambigii lagu waayay shirkaddii xawaaladda ee Barakaat oo dowladda Mareykanku ka fariisisay hantideeda 2001. waxaa qoraal-kaan ku saxiixnaa Madaxa baarista xadgudubyada Hay’ad-aasi Cali Sheekh Yaasiin (Cali Fadhaa).
Golaha Ammaanka Waxaa ka Go'an ka Shaqaynta Midnimada Soomaaliya:
»Sidaas waxaa yiri Ambassador-ka Britain ufadhiya UN
»USA: Nin Soomaali ah oo Lagu Xakumay 17-sano oo xabsi ah
»MDFKMG: Soomaaliya ma ahan Muqdisho oo Keliya
»20,000 oo Ari ah oo Roobab ku dileen Wajeer